सिस्को I-पुरस्कार फाइनल! | Martech Zone
बुधवार, मई 7, 2008 बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 Douglas Karr
मेरो असल साथीहरूको समूह, जेसन, बिल, कार्ला र म हिजो सिन्सिनाटी गएका थियौं हाम्रो लागि अन्तिम I- पुरस्कार प्रस्तुति सिस्को संग। कार्मेल सुविधा धेरै नजिक छ तर सिस्कोले हामीलाई उनीहरूको पूर्ण इनोवेशन टीम उपस्थित हुन सक्षम पार्नको लागि सार्नु आवश्यक पर्‍यो।
प्रतियोगितामा ११०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रविष्टिहरूको साथ, हामी छानिएका थियौं र semi२ सेमीफाइनल बनायो। अब हामी अन्तिम १२ विचारहरु मध्ये एक थियौं जुन एकदमै बोर्डको अगाडि प्रस्तुत थियो जसले प्रतियोगिता सुरु गर्‍यो। कुनै दबाव छैन, हह?
म यस प्रोजेक्टमा काम गर्न टोली साथीहरूको राम्रो मिश्रणको बारेमा सोच्न सक्दिन। विडम्बना, पक्कै पनि यो हो जब तपाई हार्डकर्मको टोली लिनुहुन्छ ... हामी सबैको चुनौतीपूर्ण कामहरू छन्। आई-पुरस्कारले वास्तवमै हाम्रो कामको भारमा थप्यो र म कृतज्ञ छु मेरा साथीहरू थिए जो अप्ठ्यारोमा पछाडि जान सक्ने थिएनन्। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ तनाव हाम्रो शरीर छोड्छ र हामी हाम्रो प्रस्तुति समाप्त भए पछि मुस्कान फर्कन्छ।
एउटा नमूना Telepreferences को भिडियो युट्यूबमा छ तर यसले वास्तवमै पूर्ण अनुभव प्रदान गर्दैन।
कोठा एक आंशिक अंडाकार तालिका हो जुन सीधा निर्मित भिडियो क्यामेराको साथ3ठूलो स्क्रीनहरूको सामना गर्दछ। जब तपाइँ तपाइँको ल्यापटपलाई तपाइँको प्रस्तुतीकरण गर्न प्लगइन गर्नुहुन्छ, यो स्थानीय रूपमा स्क्रीनको अन्तर्गत र टाढाको रूपमा स्क्रीन अन्तर्गत प्रक्षेपित हुन्छ ताकि सबै सदस्यहरूले यसलाई देख्न सक्दछन्।
हामीसँग हाम्रो बैठकमा physical भौतिक टेलिप्रेसेन्स स्थानहरूमा पार्टीहरू थिए साथसाथै डायल गर्ने अर्को कलर। प्रणालीले स्वचालित रूपमा तस्विर फ्लिप गर्दछ जुन स्थानमा बोल्दै छ। तर यसले सबै स्क्रिनहरू फ्लिप गर्दैन - यो केवल स्क्रिनमा फ्लिप हुन्छ जुन कसैले कुरा गरिरहेको छ। यहाँ एक उत्कृष्ट तस्वीर छ जहाँ टेनले सान होसे समूहको बाँयामा काम गरिरहेको थियो - तपाईं उनको आधा देख्न सक्नुहुन्छ।
प्रणाली प्रयोग गरेको केहि मिनेटमा, तपाईं साँच्चिकै बिर्सनुभयो कि तपाईं वास्तवमै देशको बिचको छेउमा हुनुहुन्छ। यो एक आश्चर्यजनक आरामदायक अनुभव हो। हामी पक्कै प्रभावित भएका थियौं।
मुटुमा हिर्काउने र सिस्कोबाट धेरै कार्यकारीहरू भएको कारण, मैले सबैको नाम लेख्ने प्रयास गरें तर ट्र्याक हरायो। यो अनुहार आमनेसामने हुन एक रोमाञ्चक थियो मारथिन डी बियरयद्यपि! सिस्को टोली आकस्मिक, अनुग्रही, आमन्त्रित र सहयोगी होस्टहरू थिए। र्यान्डी, पाउला र साइमनको कुनै पनि डरले हाम्रो सामु रहेको नेतृत्व टोलीसँग तुरुन्तै वाष्पीकरण भयो!
पर्याप्त! प्रस्तुति कसरी गयो?
A० मिनेटमा एक अर्ब डलर विचार बेच्ने प्रयास पक्कै नयाँ अनुभव हो। बिल हाम्रो प्रवक्ता र बैठक को टेम्पो राख्ने मान्छे थियो। म सकेसम्म धेरै उद्योग डेटा र अनुभवको साथ चिमे। हामीलाई थाहा थियो कि सबैभन्दा कठिन अवरोधले टीमलाई समाधान र अवसर पहिचान गर्नको लागि प्राप्त गरिरहेको थियो। कार्लाले हाम्रो स्लाइड डेकको चित्रण गर्दछ कि हामी प्रत्येक स्लाइडमा प्याक गरिएको डाटाको टिभी दृश्यहरू कैद गर्न।
जब तपाइँ "प्वाइन्ट अफ सेल्स" प्रणाली भन्नुहुन्छ, मान्छेहरूले तुरुन्तै बारकोड स्क्यानर, इन्भेन्टरी डेटाबेस, र एक रसिद प्रिन्ट गर्न र क्रेडिट कार्ड चार्ज गर्ने क्षमताको बारेमा सोच्दछन्। त्यो प्याराडिगम हो जुन हामीले पहिलो minutes० मिनेटमा बदल्नु पर्ने थियो!
We थियो टोलीलाई यो पहिचान गर्न को लागी POS सँग सम्वन्धित सबै सम्बन्धी सम्बन्धी अवसरको साथ व्यवसायको सम्पूर्ण केन्द्र हुनसक्दछ - सूची नियन्त्रण, खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगार, लेखा, मार्केटिंग, पुरस्कार, अनलाइन अर्डरिंग, किओस्क अर्डरिंग, वायरलेस अर्डरिंग, रिपोर्टि,, उद्यम व्यवस्थापन, आदि।
किन मानिसहरूले POS लाई 'गौरवशाली नगद दर्ता' को रूपमा हेर्छन् भन्ने कारण यो हो कि यो विगत years० बर्षमा केहि थोरै परिवर्तनको साथ भयो। फाइनलको लागि हाम्रो विचारको मूल भनेको कुनै पनि सञ्चारहरूलाई समर्थन गर्नको लागि सुरक्षित र भरपर्दो नेटवर्क सहित रेस्टुरेन्टको POS हब बनाउनु हो।
सायद प्रस्तुतीकरणको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो थियो कि हामीले बोलेझैं हामीले उनीहरूको अनुहारमा भएको भाव परिवर्तन भएको देख्न सक्दछौं र लाइट बल्बहरू सकृय भएको थियो। प्रश्नहरू 'को, के, कति' बाट 'कसरी बारेमा, तपाईं चित्र, किन छैन' बाट परिवर्तन भयो। १$ बी डलरको उद्योगको साथ, सम्भावितताहरू जुन हालको प्रस्तावसँग निराश छन्, र कुनै विक्रेता प्लेटमा पाइला टेकेका छैनन् - रेस्टुरेन्ट उद्योग सिस्कोको श्रोतहरूको साथमा कम्पनीले अवरोधका लागि प्राइम गरिएको छ।
बैठकको नजिकमा, हामीले पातलो-नेट ग्राहकहरूको कुरा गर्यौं "एक बक्समा रेस्टुरेन्ट" र विक्रेता अज्ञेय POS हार्डवेयर ग्राहकहरूको साथ गठबन्धनको विचारहरूको साथ। हो !!!! त्यो तस्विर हो जुन हामी सबै रंग्न चाहन्थ्यौं। हामीले टीमबाट केहि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाएका थियौं, केही राम्रो केमिस्ट्रीभरि, र हामीले बैठक बन्द गर्‍यौं। जेसनले बैठक समाप्त गरे र टोलीलाई बताउन दिए कि किन एउटा प्रणाली एक बृद्धिकर्ताको रूपमा उनको सफलताको लागि यति आवश्यक थियो।
मलाई लाग्दैन यो अझ राम्रो हुन सक्थ्यो! त्यहाँ थप लागत / लाभ विश्लेषण छ जुन पूरा गर्न सकिन्छ र हामी स्रोतहरू पहिचान गरे हाम्रो व्यापारको मामला परिष्कृत गर्न त्यो जानकारी प्राप्त गर्न। सही रिपोर्टको साथ आउनको लागि उद्योग रिपोर्टहरूमा केही हजार डलरहरू राम्रो विश्लेषकसँगै खसालिनु पर्छ।
अब हामी कुर्छौं! मार्थिनले सिस्को 'वा' गरेको 'अरूको धारणा सुन्न कत्ति चाखलाग्दो भनाइको साथ बैठक बन्द गर्नुभयो। हामी आशा गर्दछौं कि उनीहरूले यो ठाँउमा आफैंलाई देख्न सक्ने छन्। यसले सिस्कोलाई वाणिज्यको डाटा ब्याकबोनको रूपमा बलियो बनाउनेछ, पहिलो खाद्य सेवा खण्डमा, र सम्पूर्ण खुद्रा उद्योगलाई पछाडि।
टोलीले फोन कल समाप्त गरी minute० मिनेट डिब्रीफिंग गर्‍यो। हामी परिणामहरू सुन्न जून सम्म कुर्दछौं! टिक ... टिक ... टिक ...
यदि सिस्कोले हामीलाई छान्दैन भने हामीले यहाँ केही उद्यमीहरू, एन्जिल लगानीकर्ताहरू र यहाँको उद्यम पूंजीपतिहरूसँग विचार छलफल गरिसकेका छौं। सिस्को नेटवर्क र पहुँच बिना, यो बेच्न को लागी एक कडा विचार हुन सक्छ। त्यो हो, जबसम्म हामी कोष प्राप्त गर्दैनौं र उनीहरूको ग्राहक हुँदैनौं!
टैग: सिस्को I-पुरस्कारसिस्को iprizeटेलीप्रिसन्स
मई 7, 2008 मा 10: 34 एएम
हामी धेरै भाग्यशाली थियौं कि सिस्को कार्यकारीहरू र जेफ्री मूरको ठूलो समूहमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन। ("Chasm को क्रासिंग को लेखक: मुख्यधार ग्राहकहरु लाई मार्केटिंग र उच्च टेक उत्पादनहरु बेच्न" र चासम ग्रुपको मालिक।)
यो एक अद्वितीय अनुभव थियो, र म हाम्रो टीमले सिर्जना गरेको काममा गर्व छ। धन्यबाद, कार्ला, डग र जेसन !!